Barakac Xoogan Oo Ka Bilowday Magaalada Xalab Ee Dalka Suuriya. – Calamada.com
Barakac Xoogan Oo Ka Bilowday Magaalada Xalab Ee Dalka Suuriya.
calamada May 2, 2016 2 min read
Kumanaan dadweyne ah oo ku nool magaalada Xalab ee Waqooyiga dalka Suuriya ayaa billaabay inay ka cararaan guryahooda, wakhti diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa Nidaamka Al-Asad ay sii kordhiyeen duqeymaha wuxuushnimada ah ee ay ku hayaan magaaladaasi.
Duqeymaha xagga cirka ah ee lagu hayo magaalada ayaa galay maalintii 12aad, iyadoona saacadihii lasoo dhaafay ay Seddax duqeyn ka dhaceen fagaaraha lagu magacaabo Al-Xurriyah ee kuyaalla Xaafadda Al-BustaanÂ ee bartamaha Xalab.
Sidoo kale waxay duqeymo ka dhaceen XaafaddaÂ Salaaxu-Diin, gaar ahaan dhanka ay ka maamulaan xoogagga kacdoon wadayaasha, lamana oga illa iyo hadda khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeymahaasi.
Nidaamka NuseyrigaÂ waxa uu dhankiisa sii ballaariyay duqeymaha bahalnimada ah ee diyaaradihiisa dagaalku ay ka wadaan magaalada Xalab, waxaana tan iyo shalay weerarro xagga cirka ah ay ku socdeen deegaanno kuyaalla baadiyaha galbeed ee magaalada Xalab.
Diyaaradaha dagaalku waxay sidoo kale si baâ€™an u garaaceen Waddada muhiimka ah ee lagu magacaabo Al-Kaastiilo, taas oo ah Waddada kaliya ee Saheyda iyo Saadka ay ka helaan Kacdoon wadayaasha ku sugan magaalada, iyadoona haddii Waddadaasi la jaro ay goâ€™doon galayaan Boqllaal kun oo ruux oo Shacab ah.
Tan iyo 21-kii bishii lasoo dhaafay ee April waxay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa Nidaamka Nuseyriga ah ay duqeymo arxan darro ah ka fuliyeen magaalada Xalab, iyadoona duqeymahaasi ay ku dhinteen inkabadan 235 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 1500 ruux oo kale.
Dhanka kalena qaar ka tirsan Xoogagga Mujaahidiinta iyo Kooxaha Kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa ku heshiiyay in dib loo howl-geliyo Isbaheysiga Jeyshul Fatxi, iyadoona isku shaandheyn lagu sameeyay qaab dhismeedkii Isbaheysigaasi, halku lagu soo biiriyay Uuro hor leh sida Ururka Al-Xizbul Islaami Al-Turkistaani.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 25-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 25-07-1437 Hijri.